डोनाल्ड ट्रम्पको आरोप : विश्व स्वास्थ्य संगठन चीनको कठपुतली हो ! – HostKhabar ::
डोनाल्ड ट्रम्पको आरोप : विश्व स्वास्थ्य संगठन चीनको कठपुतली हो !
बीबीसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओ०लाई चीनको कठपुतलीु भएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले डब्लूएचओले गर्दा नै कोभिड-१९ नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ त्यसको मूल्य आम मानिसले चुकाउनु परेको बताएको केही घण्टा पछि ट्रम्पले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
सोमबार बसेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक बैठकमा अमेरिका डब्लूएचओविरुद्ध प्रस्तुत भएको थियो। विश्वको लागि आवश्यक जानकारी प्रवाह गर्न यस संस्था चुकेको छु, अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव एलेक्स एजरले भनेका थिए। लगत्तै ट्रम्पले चीनसँग जोडेर डब्लूएचओमाथि अर्को प्रश्न गरेका हुन्।
अमेरिकाले यसअघि पनि डब्लूएचओ चीन परस्त भएको भन्दै संगठनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस समय संगठन प्रमुख टेड्रोस अधानम घेब्रिएससले यस महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको कामहरुको समीक्षा गर्ने बताएका थिए। उनले आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र अनुसन्धान समेत गरिने बताएका थिए।
सोमबार र मंगलबार भइरहेको भर्चुअल सम्मेलनमा १ सय ९४ देशको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक कार्यको समीक्षा र आगामी कार्य योजना प्रस्तुत गरिन्छ। तर, यस पटक सम्मेलन कोभिड-१९ केन्द्रित भयो। केही हदमा छलफल ुअमेरिका भर्सेस चीनु केन्द्रित देखिएको बीबीसीले जनाएको छ।
किनकि ट्रम्प अमेरिकी नागरिकबाटै आलोचित छन्। संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेका छन्। जसका कारण आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ। यो सबैको दोष चीनलाई दिँदै आएका छन् ट्रम्प। कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित हुनुलाई चीनको खेल भएको बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच आयोजित सम्मेलान बारे धेरै केही नबोल्ने भन्दै ट्रम्पले भने,’यो संगठन चीन केन्द्रित छ। चीनको कठपुतली हो यो।’ चीनको निर्देशनमा डब्लूएचओले अमेरिकालाई गलत सुझाव दिएको बताए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले भने चीनले कोरोना भाइरस संक्रमण बारे सबै जानकारी खुला र पारदर्शीु ढङ्गले प्रस्तुत गरेको बताए।